warkii.com » Bruno Fernandes Oo Magacaabay Xiddiga Man United Ee Uu La Yaabay Tayadiisa Tan Iyo Markii Uu Tagay Old Trafford
Bruno Fernandes Oo Magacaabay Xiddiga Man United Ee Uu La Yaabay Tayadiisa Tan Iyo Markii Uu Tagay Old Trafford
Bruno Fernandes ayaa amaanay xiddiga ay Manchester United kawada ciyaaraan ee Marcus Rashford isagoo shaaca ka qaaday inuu la yaabay sida uu u fiican weeraryahanka da’da yar inkastoo uu ka warqabay tayadiisa.
Kubadsameeyaha reer Portugal ayaa wacdarro ka dhigaya Old Trafford tan iyo markii uu kaga soo biiray Sporting Lisbon bishii Janaayo, welina guuldarro kuma dhadhaminin kooxdiisa cusub, isagoo maraya 11 kulan oo aan laga badinin Premier League iyadoo Man United ay u tartameyso inay u soo baxdo Champions League.
Ka hor kulanka ay caawa la ciyaarayaan Crystal Palace, Fernandes ayaa la weydiiyay inuu magacaabo xiddiga ugu fiican ciyaartoyda Manchester United, wuxuuna doortay Marcus Rashford isagoo ku doortay orodkiisa.
Waxaan dooran lahaa Rashford sababtoo ah Rashford wuxuu leeyahay orod cajiib ah oo ay u sii dheer tahay tayo cajiib ah.
Fernandes ayaa ku yiri BT Sport: “Waa ay adag tahay mararka qaar inaad xawaare sidaas oo kale ah ku orodo islamarkaana aad lahaato tayo aad ku sameyso waxyaabo fiican. Inaad doorato waqtiga saxda ah ee ay kubada darbeyneyso, waqtiga aad baaseyso, waqtiga aad farsamo sameyneyso.
“Waxaan dooran lahaa Rashford waa hubaal. Wax badan ayuu iga yaabiyay.
“Dabcan waan ogaa tayadiisa, sababtoo ah waa mid ka mid ah xiddigaha da’da yar ee ugu fiican dunida.
“Waxaan dooran lahaa Rashy sababtoo ah orodkiisa ayaa ah tayooyinka ugu fiican ee uu heysto”